नेपाल आज | असारे विकासको नाममा दैनिक चार अर्ब स्वाहा, यो प्रणालीले देश चल्दैन
असारे विकासको नाममा दैनिक चार अर्ब स्वाहा, यो प्रणालीले देश चल्दैन
बुधबार, १८ असार २०७६ गते प्रकाशित - नेपाल आज (ADM)
राप्रपा संयुक्तका नेता राजाराम श्रेष्ठले वर्तमान सरकारले असारे विकासका नाममा ब्रम्हलुट मच्चाएको भन्दै यसको छानबिन गरी दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
नेपाल आजसंगको साक्षात्कारमा नेता श्रेष्ठले दैनिक साढे चार अर्ब रकम विकासको नाममा खोलामा बगाइएको आरोप लगाए ।
उनले भने, ‘ विकास भनेको योजनामा आधारित हुनुपर्छ, सन्तुलित हुनुपर्छ, दीगो हुनुपर्छ । तर यहाँ त पैसा सक्ने उद्देश्य मात्र राखिएको छ । पिच माथि पिच गरिएको छ । झमझम पानी परिरहेको छ, सडक पिच हुँदैछ, त्यो पनि हप्ता दिन टिक्दैन । यो भनेको आफनो पार्टी निकटका ठेकेदारलाई काम दिएर आफूले कमिसन कुम्ल्याउने नियत मात्र हो । ’
नेता श्रेष्ठले मुलुकमा ठूलाठूला भ्रष्टाचारका काण्ड छानबिन नहुनुमा पनि वर्तमान सरकार नै दोषी रहेको आरोप लगाए । वाइडबडी, फोर जी, सुन प्रकरण, बालुवाटार जग्गा लगायतका काण्डमा छानबिन नगर्नु नै यो सरकार र नेकपा पार्टीका नेता भ्रष्टाचारमा संलग्न छन भन्ने पुष्टि भएको उनले बताए ।
श्रेष्ठ भन्छन्, ‘भ्रष्टाचारीलाई फूलमाला लगाएर स्वागत गर्ने कुरा भएन, विद्यमान कानून अनुसार कडा कारवाही गर्नुपर्छ, जेल कोच्नुपर्छ । ’
नेता श्रेष्ठले मुलुकलाई निकास दिएर विकास र समृद्धिको मार्गमा लैजाने हो भने सबै राजनीतिक दलहरुले संवैधानिक राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रको एजेण्डामा सहमति जनाउनुपर्ने धारणा राखे ।
‘यो देश वर्वाद हुन थालिसक्यो । विदेशी चलखेल र अतिक्रमण डरलाग्दो रुपमा आएको छ । देश रहे न हामीले राजनीति गर्ने हो । यसकारण अहिलेको प्रणालीबाट मुलुक चल्दैन । यसका लागि के कांग्रेस, के नेकपा, के राप्रपा, के मधेशी दल सबै शक्तिहरु राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्रको एजेण्डामा आउनुपर्छ । यसो भयो भने मात्र मुलुक बच्छ ।’ श्रेष्ठले भने ।
नेता श्रेष्ठका अनुसार राप्रपा संयुक्त र राप्रपाबीच चाँडै एकता हुँदैछ । पार्टी सिद्धान्त र दर्शन एउटै भएपछि हिंड्ने बाटो पनि एउटै हो । एकताका लागि सांगठनिक र जिम्मेवारी व्यवस्थापनमा काम भैरहेको र अब त्यो पनि चाँडै पूरा हुनेछ ।
हाल पार्टीमा पशुपतिशम्शेर राणा र डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी अध्यक्ष छन् । कमल थापा नेतृत्वको राप्रपासंग एकता पूरा भएपछि तीनवटा अध्यक्ष हुने सम्भावना पनि प्रबल छ । त्यसपछि पार्टीको महाधिवेशनले प्रक्रियागतरुपमा पार्टीलाई अघि बढाउँछ ।
अहिले छिन्नभिन्न रहेको नेता र पार्टीलाई एकीकृत गरेपछि त्यसपछि बिभिन्न क्षेत्रमा ख्यातीप्राप्त व्यक्तिलाई पार्टीमा भित्र्याउने काम सुरु हुने श्रेष्ठको भनाइ छ ।
इस्लामिक संघको प्रमुख वक्ताले केटी साथीलाई एक वर्षसम्म बलात्कार गरिरहे !
उत्तरी नाकामा सामान रोकिँदा दशैँको व्यापार प्रभावित